विश्वकप फुटबल : के के हुँदैछ त भित्रभित्र? - खबरम्यागजिन
Homeम्यागजिनविश्वकप फुटबल : के के हुँदैछ त भित्रभित्र?
June 13, 2018 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि म्यागजिन, शब्द 0
ब्राजिलले यसअघि पाँच पटक विश्वकप फुटबलको उपाधि उचालिसकेको छ। ब्राजिलको टिम छैटौँ पटक उपाधि उचाल्ने लक्ष्यका साथ रसियाको यात्रामा निस्केको छ।
तर महान फुटबलर पेलेले भने ब्राजिलको टिम विश्वकप उपचाल्नका लागि सन्तुलित नरहेको बताएका छन्। उनले टिम च्याम्पियन हुनका लागि अझै बढी सन्तुलित हुनुपर्ने बताए।
तीन पटक विश्वकप विजेता खेलाडी पेलेले ब्राजिल टिमको आलोचना समेत गरेका छन्। ‘एउटा टिमले मात्रै विश्वकप जित्न सक्छ। नेमार एक्लैले विश्वकप जिताउन त सक्दैनन्। मेरा लागि उनी विश्वका सर्वश्रेष्ठ खेलाडीमा एक हुन्। उनी अहिले अझै परिपक्व र अनुभवी खेलाडी भइसकेका छन्।’
ब्राजीलले रूसमा हुन लागेको विश्वकपका लागि समूह-ई-मा कोस्टारिका, स्विट्जरल्यान्ड र सर्बियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।
पेलेले प्रशिक्षक टिटेप्रति भरोसा देखाउँदै भनेका छन्, ‘मलाई प्रशिक्षकप्रति पूरा भरोसा छ।’ टिटेलाई प्रशिक्षक बनाएपछि ब्राजिलले दुई वर्षयता खेलिएका २० खेलमा केवल एकमा मात्रै हारको सामना गरेको छ।
फिफा विश्वकप सुरु हुन अब केवल एक दिन मात्रै बाँकी छ। पेलेका अनुसार ब्राजिलसँग अझै सही टिम छैन। ‘हामीसँग अहिले पनि सही टिम छैन। व्यक्तिगत रूपमा सारा खेलाडी सही छन्। तर हामी अझै एउटा टिम भइसकेका छैनौँ।’
पेले नजाने रे रुस
ब्राजिलका सर्वकालीन महान् फुटबलर पेलेको चर्चा सधैं हुने गर्छ। हरेक विश्वकपमा आयोजक राष्ट्रको पाहुनाको सूचीमा पेलेको नाम प्रायः छुटेको हुन्न। रुसको मस्कोमा बिहीबारदेखि सुरु हुने विश्वकपको २१औं संस्करणमा पनि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका विशेष पाहुनाका रूपमा पेलेलाई निम्त्याइएको छ। तर, पेलेले भने स्वास्थ्य ठीक नभएको भन्दै आफू रुस नजाने बताएका छन्।
विश्वकपको उद्घाटनका अवसरमा विशेष पाहुनाका रूपमा निम्ता पाएका पेले अहिले खुट्टाको समस्याबाट पीडित रहेकाले उनको रुसयात्रा रद्द गरिएको जानकारी पेलेका प्रवक्ताले दिए। ‘पेलेले भित्रैदेखि रुस जाने इच्छा गर्नुभएको थियो। तर, स्टेडियममै बसेर आयोजक टोली रुस र साउदी अरेबियाको खेल हेर्ने उहाँको इच्छा स्वास्थ्यका कारण पूरा हुन सकेन,’ पेलेका प्रवक्ताले भनेका छन्।
७७ वर्षीय पेलेको पछिल्लो समय घुँडा, तिघ्रा र हड्डीको शल्यक्रिया गरिएको छ। त्यसैले पनि उनी त्यति हिँडडुल गर्न सक्दैनन् र घरमै आराम गरेर बसेका छन्। पेले विश्वकप फुटबलको फाइनल खेल्ने सबैभन्दा कम उमेरका खेलाडी हुन्। सन् १९५८ मा स्विडेनमा भएको विश्वकपको फाइनल खेल्दा पेलेको उमेर केवल १७ वर्ष दुई सय ४९ दिन थियो। उक्त विश्वकपको फाइनलमा ब्राजिलले आयोजक स्विडेनलाई ५-२ गोलले हराउँदै उपाधि चुमेको थियो। फाइनल खेलमा पेलेले पनि दुई गोल गरेका थिए। उक्त विश्वकपमा पेलेले कुल ६ गोल गरेका थिए।
यसैगरी ७७ वर्षीय पेले विश्वकप फुटबलको इतिहासमा तीन पटक उपाधि जित्ने एकमात्र खेलाडी पनि हुन्। ब्राजिलले सन् १९५८, सन् १९६२ र सन् १९७० मा विश्वकपको उपाधि जित्दा उनी टोलीका महत्वपूर्ण सदस्य थिए। चिलीमा सन् १९६२ मा भएको विश्वकपको फाइनलमा ब्राजिलले चेकोस्लोभाकियालाई ३-१ गोलले हराएको थियो। उक्त विश्वकपमा पेलेले केवल एक गोल गरेका थिए।
सन् १९७० मा मेक्सिकोमा भएको विश्वकपको फाइनलमा ब्राजिलले इटालीलाई ४-१ गोलले हराएको थियो। फाइनलमा पहिलो गोल १८औं मिनेटमा पेलेले नै गरेका थिए। उक्त विश्वकपमा पेलेले कुल चार गोल गरेका थिए। यसदेखि बाहेक पेलेले सन् १९६६ मा इङ्ल्यान्डमा भएको विश्वकप पनि खेलेका थिए। ब्राजिल पहिलो चरणबाटै बाहिरिएको उक्त विश्वकपमा पेलेले एक गोल गरेका थिए। यसैगरी पेले विश्वकपमा गोल गर्ने सबैभन्दा कम उमेरका खेलाडी पनि हुन्। सन् १९५८ को विश्वकपमा वेल्सविरुद्घको खेलमा गोल गर्दा उनको उमेर केवल १७ वर्ष दुई सय ३९ दिन थियो।
मेस्सीको भविष्य रुसमा निर्भर
अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनेल मेसीले अन्तरराष्ट्रिय खेलमा आफ्नो भविष्य रूसमा हुने विश्वकपमा देशको प्रदर्शनमा निर्भर रहेको बताएका छन्।
मेसीले स्पेनको डेली स्पोर्ट्ससँग कुरा गर्दै भनेका छन्, ‘मेरो अन्तरराष्ट्रिय करिअरको भविष्य रुसमा हुने विश्वकपमा देशले गर्ने प्रदर्शनमा निर्भर हुनेछ। हामी विश्वकप कसरी टुङ्ग्याउँछौँ, त्यसैमा मेरो भविष्य पनि अडिएको छ।’
मेसीले अझ अर्जेन्टिनाका सञ्चारमाध्‍यमसँग त आफूहरुको सम्बन्ध राम्रो हुन नसकेको बताएका छन्। ‘विशेषगरी अर्जेन्टिनाका सञ्चारमाध्यमसँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो रहेन। हामीले गुमाएका तीन फाइनलले कति महत्वपूर्ण अर्थ राख्छन् भन्ने कुरालाई लिएर हाम्रो दृष्टिकोणमा गहिरो मतभेद छ।’
अर्जेन्टिनाको टिमले सन् २०१४ मा विश्व कप फाइनलमा जर्मनीविरुद्ध अतिरिक्त समयमा १-० ले नतिजा सुम्पिएको थियो। त्यसपछि सन् २०१५ र २०१६ मा कोपा अमेरिका कपको उपाधि पनि पेनल्टी सुटआउटमा गुमाउँदै अर्जेन्टिना नमिठो पीडाबाट गुज्रिएको छ।
विश्वकपका क्रममा ३१ वर्ष पुग्न लागेका मेसीले स्पेन, ब्राजिल, जर्मनी, फ्रान्स र बेल्जियमलाई यो विश्वकपको उपाधि दाबेदार सूचीमा राखेका छन्। तर उनले अर्जेन्टिनाको उपाधि दाबेदारीबारे केही बोलेका छैनन्।
विश्पकप खेल्ने सबैभन्दा धनी र गरिब राष्ट्र कुन कुन?
विश्वकप फुटबलको २१औं संस्करणमा ३२ टोलीले सहभागिता जनाएका छन्। विश्वकपमा सहभागी देशमध्ये सबैभन्दा धनी राष्ट्र स्विट्जरल्यान्ड हो। यस्तै सबैभन्दा गरिब मुलुक सेनेगल रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ। स्विट्जरल्यान्डको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ८० हजार अमेरिकी डलर रहेको छ। जबकि अफ्रिकी मुलुक सेनेगलका जनताको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ३८ मात्रै छ।
स्विट्जरल्यान्डपछिको दोस्रो धनी राष्ट्र आइसल्यान्ड हो। यहाँका जनताको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ७० हजार तीन सय ३२ अमेरिकी डलर छ। आइसल्यान्ड जनसंख्याको हिसाबले भने सबैभन्दा सानो मुलुक हो। यहाँको कुल जनसंख्या तीन लाख ३४ हजार मात्रै रहेको छ। जनसंख्याको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो देश भने ब्राजिल हो। यस देशको जनसंख्या २१ करोड रहेको छ। ब्राजिलपछि अधिक जनसंख्या भएको मुलुकमा नाइजेरिजा पर्दछ। अफ्रिकी मुलुक नाइजेरियाको जनसंख्या १९ करोड ५० लाख रहेको छ। यसैगरी आयोजक रुस ३२ राष्ट्रमध्ये तेस्रो नम्बरमा पर्दछ। रुसको जनसंख्या १४ करोड ४० लाख छ। यसैगरी १३ करोड जनसंख्याका साथ मेक्सिको चौथो र १२ करोड ७० लाख जनसंख्याका साथ एसियाली मुलुक जापान पाँचौं स्थानमा छ।
यसैगरी विश्वकपमा सहभागी ३२ राष्ट्रमध्ये तेस्रो धनी मुलुक हो, डेनमार्क। डेनमार्कका जनताको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ५६ हजार चार सय ४४ लडर रहेको छ। विश्वकपमा सहभागी अर्को धनी मुलुक हो, अस्ट्रेलिया। एसियाली राष्ट्र अस्ट्रेलियाका जनताको वार्षिक आय ५५ हजार सात सय सात अमेरिकी डलर छ। यसैगरी युरोपियन राष्ट्र स्विडेन विश्वकपमा सहभागी पाँचौं धनी राष्ट्र हो। यहाँका नागरिकको वार्षिक आय ५३ हजार दुई सय १८ अमेरिकी डलर रहेको छ ।
को हुन् सबैभन्दा कान्छा खेलाडी?
उत्तरी आयरल्यान्डका नर्मन ह्वाइटसाइड विश्वकप फुटबल खेल्ने सबैभन्दा कम उमेरका खेलाडी हुन्। सन् १९८२ मा स्पेनमा आयोजना भएको विश्वकपमा उत्तरी आयरल्यान्ड पनि छनोट भएको थियो। सोही विश्वकपमा ह्वाइटसाइड पनि उत्तरी आयरल्यान्डको टोलीमा परेका थिए। समूहगत चरणमा उत्तरी आयरल्यान्डले जुन १७ तारिखमा आफ्नो पहिलो खेल युगोस्लाभियासँग खेलेको थियो।
उक्त खेल खेल्दा ह्वाइटसाइडको उमेर केवल १७ वर्ष ४१ दिन पुगेको थियो। सोही खेलबाट उनले विश्वकप खेल्ने सबैभन्दा कम उमेरका खेलाडीको कीर्तिमान बनाएका हुन्। यद्यपि, विश्वकपको आफ्नो पहिलो खेलमै ह्वाइटसाइडले पहेँलो कार्ड पाएका थिए।
सो खेलमा पहेँलो कार्ड पाउने उनी एकमात्र खेलाडी थिए। युगोस्लाभिया विरुद्धको खेल गोलरहित बराबरीमा सकिए पनि उत्तरी आयरल्यान्ड समूह विजेताका रूपमा दोस्रो चरणसम्म पुगेको थियो।
होन्डुरसविरुद्धको आफ्नो दोस्रो खेलमा भने उनी ६६ औं मिनेटमा परिवर्तित खेलाडीका रूपमा मैदानबाट बाहिरिएका थिए। सो खेलमा युगोस्लाभिया १—१ गोलको बराबरीमा रोकिएको थियो। स्पेनविरुद्धको तेस्रो खेलमा पनि ह्वाइटसाइड ७३औं मिनेटमा मैदानबाट बाहिरिएका थिए। उक्त खेलमा उत्तरी आयरल्यान्ड १-० ले विजयी भएको थियो। ह्वाइटसाइडको उपस्थितिमा उनको टोलीले विश्वकपमा जितेको यो पहिलो खेल थियो।
सो विश्वकपमा उनले गोल भने गर्न सकेनन्। ५३ वर्षीय ह्वाइटसाइडले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा उत्तरी आयरल्यान्डका लागि ३८ खेल खेल्दै नौ गोल गरेका थिए।
भूल न दोहोऱ्याउने रे स्वारेजले
बिहीबारदेखि रुसमा सुरु हुने विश्वकपमा दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र उरुग्वेको ध्यान भने आफ्ना स्टार खेलाडी लुइस स्वारेजमा केन्द्रित हुनेछ। मैदानमा स्वारेजको प्रदर्शन र उनको उग्र व्यवहारका कारण पनि। चार वर्षअघि ब्राजिलमा भएको विश्वकपमा इटालीका डिफेन्डर जर्जियो चिलिनीलाई मैदानमै टोकेपछि विश्वकपबाट बाहिरिएका स्वारेजलाई नियन्त्रण राख्न यसपटक उरुग्वेले हरसम्भव उपाय अवलम्बन गर्नेछ।
स्वारेज आफैंले भने चार वर्षअघिको तुलनामा अहिले आफूमा धेरै परिवर्तन आइसकेको बताएका छन्। उनले ब्राजिलको जस्तो घटना अब आफूबाट नदोहोरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आफ्ना समर्थकलाई आश्वस्त पारेका छन्। ‘ब्राजिल विश्वकपमा जे भयो त्यो मेरो गल्ती थियो। मेरो गल्तीले देशले पनि ठूलै मूल्य चुकाउनु पर्‍यो। अहिले म बदलिइसकेको छु। विश्वकपमा राम्रो छवि देखाउने प्रयास गर्नेछु’, स्वारेजले भनेका छन्, ‘अब मबाट पुरानो गल्ती दोहोरिँदैन।’
स्वारेज उरुग्वेका लागि विश्वकपमा सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी पनि हुन्। विपक्षी खेलाडीलाई टोकेपछि स्वारेजमाथि नौ खेलको प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। फिफाको अनुशासन समितिले उनीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। स्वारेज प्रतिबन्धमा परेपछि दुई पटकको विश्वकप विजेता उरुग्वे प्रिक्वार्टरफाइनलबाटै बाहिरिएको थियो। अन्तिम १६ टोलीबीचको भिडन्तमा कोलम्बियाले उरुग्वेलाई पराजित गरेको थियो।
विश्वकपको अघिल्लो संस्करणमा प्लेअफबाट स्थान सुरक्षित गरेको उरुग्वे यस पटक भने पहिलो चरणबाटै छनोट भएको हो। उरुग्वे ब्राजिलपछि दोस्रो स्थानमा रहँदै १५औं पटक विश्वकपमा छनोट भएको हो। सन् १९३० मा आफ्नै घरेलु मैदानमा विश्वकपको पहिलो संस्करण जितेको उरुग्वेले हालसम्म दुई पटक विश्वकप चुमेको छ।
जेफरीको ह्याट्रिक बिर्सिनु भो
विश्वकप फुटबलको इतिहासमा हालसम्म एकजना खेलाडीले मात्र फाइनल खेलमा ह्याट्रिक गरेका छन्। सन् १९६६ को विश्वकपको फाइनलमा इङ्ल्यान्डका खेलाडी जेफरी हस्र्टले ह्याट्रिक गरेका थिए। उक्त विश्वकपको फाइनलमा इङ्ल्यान्डले अतिरिक्त समयमा तत्कालीन पश्चिम जर्मनीलाई ४-२ गोलले हराउँदै पहिलो पटक उपाधि चुमेको थियो।
उक्त विश्वकपको फाइनल निकै रोमाञ्चक थियो। निर्धारित समयको खेल २-२ गोलको बराबरीमा सकिएपछि हारजितको निर्णयका लागि अतिरिक्त समय थप गरिएको थियो। त्यसपछि जेफरीले १०१ र १२० मिनेटमा लगातार दुई गोल गर्दै इङ्ल्यान्डलाई विजयी बनाएका थिए। त्यसअघि उनले निर्धारित समयको १८औं मिनेटमा टोलीका लागि पहिलो गोल गरेका थिए।
उक्त विश्वकपमा जेफरीले कुल चार गोल गरेका थिए। अर्को एक गोल भने उनले क्वार्टरफाइनल खेलमा गरेका थिए। उनले क्वार्टरफाइनल खेलको ७८औं मिनेटमा गोल गरेपछि इङ्ल्यान्ड बलियो प्रतिद्वन्द्वी अर्जेन्टिनालाई १-० ले हराउँदै सेमिफाइनलमा पुगेको थियो। सन् १९६६ देखि सन् १९७२ को बीचमा इङ्ल्यान्डको राष्ट्रिय टोलीबाट ४९ खेल खेल्दै २४ गोल गरेका जेफरी हाल ७६ वर्षका भए।
जेफरीले इङ्ल्यान्डका लागि सन् १९७० को विश्वकपमा पनि एक गोल गरेका थिए। उनले वेस्टहाम युनाइटेड, स्टोक सिटी, वेस्ट ब्रोमविचलगायतका क्लबबाट व्यावसायिक फुटबल पनि खेलेका थिए। सक्रिय खेल जीवनबाट सन्न्यास लिएपछि उनले लामो समय प्रशिक्षकको भूमिकासमेत निर्वाह गरेका थिए।
उद्घाटनमा रोनाल्डोले गाउने रे गीत
आगामी बिहीबारदेखि रुसमा सुरु हुने २१औं संस्करणको फिफा विश्वकपको उद्घाटन समारोहमा चर्चित ब्राजिलियन फुटबलर रोनाल्डोको पनि प्रस्तुति रहने भएको छ। आयोजक रुस र एसियन टोली साउदी अरेबियाबीचको खेल अघि हुने उद्घाटन समारोहमा रोनाल्डोसहित बेलायती पपगायक रोबिई विलियम्स र रुसी गायिका आइदा गारिफुल्लिनाले विशेष प्रस्तुति दिनेछन्।
‘किन हुँदैछ सिक्किममा शेर्पा मास्ने षडयन्त्र?’
दार्जीलिङमा फेरि भड्कियो हिंसाः गोलीबारीमा एक पुलिस अधिकारीको मृत्युःजारी छ गोलीबारी (33,590)
विमल गुरूङले आज अचानक खुलासा गर्दै भने-दिल्लीले बोलाउँदैछ, गोर्खाल्यान्डको लागि हो भने मात्रै जान्छुः गुरूङ उत्रिए सांसदको राजिनामा मागको विपक्षमा (30,826)
मोर्चाले केन्द्रलाई दियो अल्टिमेटमः भन्यो- 8 अगस्त6बजीभित्र केन्द्रले वार्ता बोलाएन भने9अगस्तदेखि आन्दोलन कठोर गर्नेछौँ (29,407)
वरूण मृत्यु मामिलामा धेरैवटा सनसनीपूर्ण खुलासा: “मोर्चाको अर्को गुटले भनेको थियो, ‘तेरो दाजुलाई जेलबाट निकाल्नु छ भने हाम्रो गुटमा आइज, तर हामीले सम्झौता गरेनौँ’ (20,721)
पवारले दिए गृहमन्त्रीलाई त्रिपक्षीय वार्ताको दबाउ: केन्द्रले चाँड़ै वार्ताको प्रस्ताव दिनेछ: राजनाथ (19,105)
बन्द खोल्ने नखोल्नेबारे निर्णय गर्ने दायित्व मोर्चाको हो- विमल गुरूङ (18,622)